IOS7| सफारीको साथ निजी ब्राउजि use कसरी प्रयोग गर्ने आईफोन समाचार
IOS in मा सफारीको साथ निजी ब्राउजि use कसरी प्रयोग गर्ने
La निजी ब्राउजि। सफारीमा ब्राउजि option विकल्प उपलब्ध छ, जसले हामीलाई हाम्रो उपकरणमा डाटा छोडे बिना ब्राउज गर्न अनुमति दिन्छ, जस्तै अस्थायी फाइलहरू, कुकीज, ब्राउजि history ईतिहास, अन्य चीजहरूको माझ।
यस प्रकारको नेभिगेसन विविध कारणका लागि धेरै लोकप्रिय छ र कुनै आईप्याड, आईफोन र आईपड टचमा प्रयोग गर्न सजिलो छ किनकि हामी यो गर्न सक्दछौं। सिधा सफारी ब्राउजरबाट, हामीले हाम्रो ब्राउजरमा खोलेका कुनै पनि ट्याबहरू गुमाए बिना। यस विकल्पले ती सुधारहरू थप्दछ जुन हामीले पहिले आईओएस of को अघिल्लो संस्करणमा थियौं।
IOS को अघिल्लो संस्करणमा, हामीले तेस्रो अनुप्रयोगहरूमा सहारा लिनु पर्‍यो निजी रूपमा ब्राउज गर्न सक्षम हुन, जस्तै गुगल क्रोम। केही हप्ता पहिले यो देखाइएको थियो क्रोममा निजी ब्राउजिingले भनेको छैन निजी हो, किनकि यसले भ्रमण गरिएको पृष्ठहरूको इतिहास बचत गर्दछ। निजी ब्राउजि in भित्र प्रयोग गर्नुहोस् IOS7को साथ सफारी यो कहिल्यै सजिलो भएको छैन, र यसको प्रयोग आईप्याड, आईफोन र आईपड टच दुबैमा उस्तै छ।
हामीले ब्राउजरमा खोलेका वेब पृष्ठहरू देखा पर्नेछ।
मा रहेको + प्रतीकमा क्लिक गर्नुहोस् माथिल्लो दाहिने कुना.
यदि हामीसँग एक ठेगाना मनपर्नेमा सुरक्षित गरिएको छ भने, तिनीहरू ब्राउजरको तल देखा पर्दछन्।
अर्को हामी दिन्छौं नाभ निजीतल्लो बायाँ कुनामा अवस्थित छ।
एक सन्देश हामीलाई सूचित गरीन्छ यदि हामी निजी ब्राउजि previously सक्रिय गर्नु अघि पहिले खोलिएको वेब पृष्ठहरूको ट्याबहरू बन्द गर्न चाहान्छौं।
त्यसो भए हामी विकल्प चाहान्छौं जुन हामी चाहान्छौं। यदि हामी तिनीहरूलाई बन्द गर्न चाहन्छौं, सफारीले यसलाई गर्नेछ। अन्यथा, ब्राउजरको रंग कालोमा परिवर्तन हुनेछ र हामी निजी ब्राउज गर्न सुरु गर्दछौं।
निजी ब्राउजि exitबाट बाहिर निस्कन, हामीले गर्नुपर्ने भनेको उद्देश्यका लागि विकल्पमा क्लिक गर्नुपर्दछ, त्यो हो, नाभको बारेमा। निजी, त्यसपछि ब्राउजर फेरि सेतो हुनेछ, कालोको सट्टामा, जसले इ anonym्गित गर्दछ कि हामी गुमनाम रूपमा ब्राउज गरिरहेका छौं।
थप जानकारी - आईओएसको लागि क्रोममा इन्कग्निटो मोड यति "इन्कग्निटो" होइन
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» IOS in मा सफारीको साथ निजी ब्राउजि use कसरी प्रयोग गर्ने
दिमागमा राख्नुहोस् कि निजी ब्राउजि using को उपयोगको मामलामा ट्याबहरू आइक्लाउड मार्फत समक्रमण गर्न सकिदैन।
म चिनियाँ भएँ जबसम्म मैले महसुस गरेन किन म दुई उपकरणहरू बीच सि between्क गरिरहेको छैन। कसैको लागि स्पष्ट, अरुको लागि कम।
र बच्चाहरू र इन्टरनेटको साथ के गर्ने? म चिन्तित छु कि उनीहरूले के ब्राउज गरिरहेका छन् मलाई कसरी थाहा हुन्छ?
मार्थालाई जवाफ दिनुहोस्
उनीहरू कहाँ नेभिगेट गर्छन् भनेर जान्न तपाईंसँग ईतिहास छ। तर सेटिंग्स-सामान्य-सीमित-वेब मा तपाईं सामग्री सीमित संभावना छ।
मुख्य कुरा यो हो कि निजी ब्राउजि withको साथ तपाईं ईतिहासमा ट्रेस छोड्नुहुन्न। त्यो त्यस्तै हो, हैन त?
Ignacio लोपेज भन्यो
तपाईं सेटिंग्स भित्र ब्राउजिंग प्रतिबन्धहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले आफ्ना बच्चाहरूलाई हेर्न अनुमति दिनुहुने अनुसार कन्फिगर गर्नुहोस्।
Ignacio López लाई जवाफ दिनुहोस्
सन्देश आउँछ जब म निजी ब्राउजिंग खोल्छु ट्याबहरू खुला राख्न वा बन्द राख्नको लागि, मेरो मोबाइलमा यो आउँदैन, म प्रत्यक्ष निजी ब्राउजि into मा जान्छु जब म बटन थिच्दछु। त्यो किन हो? साथै म आइकनमा सबै भन्दा धेरै हेरिएको पृष्ठहरू प्राप्त गर्दछ, के यो ईतिहास बचत नगर्ने हो? त्यहाँ बाहिर आउने पृष्ठहरू किन छन्? धन्यबाद
त्यो सन्देश भर्खरको संस्करणमा हराएको जस्तो देखिन्छ, कम्तिमा पनि यो मलाई देखा पर्दैन। अन्य, वास्तवमा निजी ब्राउजिंग को पृष्ठ हो, निजी होईन।
ए! ल ल। र त्यहाँ जान्ने कुनै तरिका छैन यदि निजी ब्राउजि iPhone आईफोन सफारीमा प्रयोग भइरहेको छ?
Pepi लाई जवाफ दिनुहोस्
दूर्भाग्यवश होइन। उत्तम विकल्प सामग्रीमा पहुँच ब्लक गर्नु हो जुन तपाईं प्रतिबन्धहरू मार्फत पहुँच गर्न चाहनुहुन्न।
ट्रिक: कसरी तपाइँ आईफोनमा संगीत बजाउन रोक्न सक्नुहुन्छ जब तपाइँ सुत्न जानुहुन्छ
Actualidad iPhone र Concept इनबक्सको साथ एक iPhone 5s जीत